China isina moto jira uye Silicone Tape fekitori uye vagadziri | Weicheng
Chigadzirwa Chigadzirwa Mucheka usina moto, jira resilicone
Yakananga modhi 0.3mm gobvu
Ruvara Dzvuku, grey, yero, nhema, chena, bhuruu (Namib)
Chigadzirwa Makomborero Kukwesha kuramba, isina mvura, isina moto, alkali kuramba, kukwirira kuchinjika
Chinangwa Chikuru Inokodzera kune-saiti kutenderera kwemagetsi uye gasi yekucheka midziyo yekudzivirira yekuvaka ngarava, hombe simbi zvivakwa uye magetsi emagetsi ekugadzirisa. Inokodzera keteni remoto, gumbeze remoto, kuwelda kwemagetsi, fenzi yemoto, nezvimwe.
Mucheka wemoto chishandiso chakakodzera chekuchengetedza yezvikamu zvakakosha zvekuchengetedzwa kweruzhinji kuchengetedzwa kwemoto. Kana basa remoto rikaitwa munzvimbo huru dzezvitoro, muzvitoro, mahotera nedzimwe nzvimbo dzevaraidzo dzeveruzhinji, senge kuwelda uye kucheka, kushandiswa kwejira-moto jira kunogona kudzora zvakananga spark spatter, kupatsanura uye kuvhara zvinhu zvinopisa uye zvinoputika zvine njodzi, uye kuona kuvimbika kwehupenyu hwevanhu nepfuma.
Jira risingadzivirwe moto rinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yengarava yehurongwa hwechikepe uye kugadzirisa, uye zvakare inogona kushandiswa mune petrochemical mabhizinesi ekupisa kupisa kwesimbi simbi, uko kunodikanwa kunodiwa, kuratidza kudzivirirwa kwakanaka kuchinjika.
tsvuku, kuchena, chena, nhema uye mamwe mavara, anogona kuve akagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Upamhi: 1000mm, 1200mm ukobvu: 0.3mm / 0.5mm / 0.8mm / 1.0-3.0mm, mamwe maratidziro anogona kugadzirwa.
Pashure: Cable moto unodzivirira kupfeka
Zvadaro: Chipingamupinyi chemoto